“Awa Yake Yakanga Isati Yasvika” — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
w00 9/15 pp. 10-15
“Awa Yake Yakanga Isati Yasvika”
Kutsunga Kuita Kuda kwaMwari
Kushingairira Imba yaJehovha
Kudzidzisa Kukuru muGarireya
Kupupura Noushingi muJudhiya nePeriya
Chishamiso Chisina Angachiramba
Bhuku reBhaibheri Nhamba 43—Johane
“Rugwaro Rwose Rwakafuridzirwa naMwari uye Runobetsera”
“Hapana akaisa ruoko paari, nokuti awa yake yakanga isati yasvika.”—JOHANI 7:30.
1. Zvinhu zvipi zviviri zvaidzora zvaiitwa naJesu?
“MWANAKOMANA womunhu akauya, kwete kuzoshumirwa, asi kuzoshumira nokupa mweya wake kuti uve rudzikinuro mukutsinhana nevakawanda,” Jesu Kristu akaudza vaapostora vake kudaro. (Mateu 20:28) Kuna gavhuna weRoma Pondiyo Pirato, akati: “Izvi ndizvo zvandakaberekerwa, uye ndizvo zvandakauyira munyika, kuti ndipupurire chokwadi.” (Johani 18:37) Jesu ainyatsoziva kuti aizofirei uye kuti ibasai raaifanira kuita asati afa. Aizivawo kuti akanga ane nguva yakareba sei kuti azadzise basa rake. Ushumiri hwake pasi pano ari Mesiya hwaizova hwakareba makore matatu nehafu chete. Hwakatanga nokubhabhatidzwa kwake mumvura muRwizi rweJodhani (muna 29 C.E.) pakutanga kwevhiki yokufananidzira yechi70 yakanga yafanotaurwa uye hwakapera nokufa kwake padanda rokutambudzikira pakati pevhiki iyoyo (muna 33 C.E.). (Dhanieri 9:24-27; Mateu 3:16, 17; 20:17-19) Nokudaro, zvose zvaiitwa naJesu pasi pano zvaidzorwa zvikurukuru nezvinhu zviviri: chinangwa chokuuya kwake uye kusarudzwa nomazvo kwenguva chaiyo yaaizozviita.
2. Jesu anoratidzwa sei muEvhangeri, uye akaratidza sei kuziva basa rake?
2 Nhoroondo dzeEvhangeri dzinoratidza Jesu Kristu somunhu aiita basa akafamba munyika yeParestina yose, achizivisa mashoko akanaka oUmambo hwaMwari uye achiita mabasa akawanda esimba. Nechokwokutanga-tanga kwoushumiri hwaJesu hwokushingaira, zvinotaurwa nezvake kuti: “Awa yake yakanga isati yasvika.” Jesu pachake akataura mashoko okuti: “Nguva yangu yakafanira haisati yanyatsosvika.” Ushumiri hwake hwave kuda kupera, akashandisa mashoko okuti “awa yasvika.” (Johani 7:8, 30; 12:23) Kuziva kwaJesu nezveawa, kana kuti nguva yebasa rake raakapiwa, kusanganisira rufu rwake rwechibayiro, kunofanira kuva nezvakwakaita pane zvaaitaura nezvaaiita. Kunzwisisa izvi kungaita kuti tinzwisise unhu hwake uye mafungiro aaiita, zvichitibatsira kuti tinyatso“tevera tsoka dzake.”—1 Petro 2:21.
3, 4. (a) Chii chinoitika pamutambo womuchato muKana? (b) Nei Mwanakomana waMwari achiramba zvinokumbirwa naMariya zvokuti anofanira kuita chimwe chinhu nezvokupera kwewaini, uye tingadzidzei kubva mune izvi?
3 Igore ra29 C.E. Mazuva mashoma chete apfuura pashure pokunge Jesu asarudza pachake vadzidzi vake vokutanga. Zvino vose vauya kumusha weKana uri muruwa rweGarireya kuti vapinde mutambo womuchato. Amai vaJesu, Mariya, varipowo. Waini inoperevedza. Achiratidza kuti Jesu anofanira kuita chimwe chinhu, Mariya anoudza mwanakomana wake kuti: “Havana waini.” Asi Jesu anopindura kuti: “Ndinei newe mukadzi? Awa yangu ichigere kusvika.”—Johani 1:35-51; 2:1-4.
4 Mhinduro yaJesu yokuti, “Ndinei newe mukadzi?” rudzi rwomubvunzo wenguva dzekare unoratidza kuramba zvinenge zvataurwa kana zvinenge zvanzi zviitwe. Nei Jesu achiramba mashoko aMariya? Zvino ava namakore 30. Vhiki shomanana izvi zvisati zvaitika, akabhabhatidzwa, akazodzwa nomudzimu mutsvene, uye akasumwa naJohani Mubhabhatidzi kuti ndiye “Gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika.” (Johani 1:29-34; Ruka 3:21-23) Iye zvino anofanira kutungamirirwa neChiremera Chikuru chakamutuma. (1 VaKorinde 11:3) Hapana munhu, kunyange wepedyo mumhuri, aibvumirwa kupindira mubasa rakauya kuzoitwa naJesu pasi pano. Kutsunga kwakadini kwokuita kuda kwaBaba vake kunoratidzwa nemhinduro yaJesu kuna Mariya! Isuwo ngatitsunge zvakadaro kuti tizadzise ‘zvatakafanira kuita’ kuna Mwari.—Muparidzi 12:13.
5. Jesu Kristu anoita chishamisoi muKana, uye chinoita kuti vamwe vaite sei?
5 Achinzwisisa pfungwa yamashoko emwanakomana wake, Mariya anoenda padivi nokukurumidza uye anoudza vashandi vacho kuti: “Zvinhu zvose zvaanokuudzai, itai.” Uye Jesu anopedza chinetso chacho. Anoudza vashandi vacho kuti vazadze zvirongo nemvura, uye anochinja mvura kuva waini inonaka kwazvo. Izvi zvinoitika samavambo esimba raJesu rokuita zvishamiso, zvichipa chiratidzo chokuti mudzimu waMwari uri paari. Apo vadzidzi vatsva vanoona chishamiso ichi, kutenda kwavo kunosimbiswa.—Johani 2:5-11.
6. Nei Jesu achitsamwa nezvaanoona patemberi muJerusarema, uye anoitei?
6 Pasina nguva refu chave chirimo cha30 C.E., uye Jesu navamwe vake vari munzira kuenda Jerusarema kunochengeta Paseka. Vari ikoko, vadzidzi vake vanoona Mutungamiriri wavo achiita nenzira iyo zvichida vasati vambomuona achiita. Vatengesi vechiJudha vane makaro vari kutengesa mhuka neshiri zvokupa sezvibayiro mutemberi chaimo. Uye vari kuchaja vanamati vechiJudha vakatendeka mitengo mikuru kwazvo. Atsamwa, Jesu anoita chiito. Anoruka tyava yetambo uye anodzinga vatengesi vacho. Achidurura mari yevaichinja mari, anopidigura tafura dzavo. “Bvisai zvinhu izvi muno!” anorayira vari kutengesa njiva. Apo vadzidzi vaJesu vanomuona achiita nokushingaira kudaro, vanoyeuka uprofita pamusoro peMwanakomana waMwari hwokuti: “Kushingairira imba yenyu kuchandipedza.” (Johani 2:13-17; Pisarema 69:9) Isuwo tinofanira kungwarira nokushingairira kusabvumira mafungiro enyika kushatisa kunamata kwedu.
7. (a) Chii chinoita kuti Nikodhimo ashanyire Mesiya? (b) Tinodzidzei kubva mukupupura kwaJesu kumukadzi muSamariya?
7 Ari muJerusarema, Jesu anoita zviratidzo zvinoshamisa, uye vanhu vakawanda vanotenda maari. Kunyange Nikodhimo, nhengo yeSanihedrini, kana kuti dare rapamusoro rechiJudha, anoororwa naJesu uye anoenda kwaari usiku kuti adzidze zvakawanda. Ipapo, Jesu navadzidzi vake vanogara “munyika yeJudhiya” kweinenge mwedzi misere, vachiparidza nokuita vadzidzi. Zvisinei, zvichitevera kusungwa kwaJohani Mubhabhatidzi, vanobva muJudhiya vachienda Garireya. Sezvavanopfuura nomuruwa rweSamariya, Jesu anowana mukana wokupupura zvakasimba kumukadzi muSamariya. Izvi zvinovhura mukana wokuti vaSamariya vakawanda vave vatendi. Isuwo ngative vakangwarira mikana yokutaura nezvoUmambo.—Johani 2:23; 3:1-22; 4:1-42; Mako 1:14.
8. Jesu anotanga basai muGarireya?
8 “Awa” yorufu rwaJesu isati yasvika, ane zvakawanda zvokuita mubasa raBaba vake vokudenga. MuGarireya, Jesu anotanga ushumiri hwakatokura kupfuura muJudhiya neJerusarema. Anofamba “neGarireya yose, achidzidzisa mumasinagogi avo nokuparidza mashoko akanaka oumambo uye achirapa hosha dzorudzi rwose noundonda hworudzi rwose pakati pevanhu.” (Mateu 4:23) Mashoko ake anokurudzira kuita chiito okuti: “Pfidzai, nokuti umambo hwokumatenga hwaswedera pedyo,” anonzwika muruwa rwose. (Mateu 4:17) Mumwedzi mishomanana, vadzidzi vaviri vaJohani Mubhabhatidzi pavanouya kuzozvinzwira mushumo waJesu kwaari pachake, anovaudza kuti: “Endai, muudze Johani zvamaona nokunzwa: mapofu ari kuona, vanokamhina vari kufamba, vane maperembudzi vari kucheneswa nematsi dziri kunzwa, vakafa vari kumutswa, uye varombo vari kuudzwa mashoko akanaka. Uye anofara munhu asina kugumburwa neni.”—Ruka 7:22, 23.
9. Nei mapoka achidirana kuna Kristu Jesu, uye tingawana chidzidzo chipi kubva mune izvi?
9 ‘Mashoko akanaka pamusoro paJesu anopararira munyika yose yakapoteredza,’ uye mapoka makuru anodirana achienda kwaari—kubva kuGarireya, Dhekaporisi, Jerusarema, Judhiya uye mhiri kweRwizi rweJodhani. (Ruka 4:14, 15; Mateu 4:24, 25) Vanouya kwaari kwete chete nemhaka yokuporesa kwake kunoshamisa asiwo nemhaka yokudzidzisa kwake kunoshamisa. Mashoko ake anofadza uye anokurudzira. (Mateu 5:1–7:27) Mashoko aJesu anonakidza uye anofadza kwazvo. (Ruka 4:22) Mapoka avanhu “a[no]shamiswa nemadzidzisire ake,” nokuti anotaura nesimba zvinobva muMagwaro. (Mateu 7:28, 29; Ruka 4:32) Ndiani angasakwezvwa nomunhu akadaro? Isuwo ngatikudziridzei unyanzvi hwokudzidzisa kuitira kuti vanhu vane mwoyo yakatendeseka vakwezvwe nechokwadi.
10. Nei vanhu vomutaundi reNazareta vachiedza kuuraya Jesu, uye nei vachikundikana?
10 Zvisinei, havasi vose vanonzwa Jesu vanogamuchira. Kunyange kumavambo oushumiri hwake, paanenge achidzidzisa musinagogi romutaundi yokumusha kwake muNazareta, pane vanoedza kumuuraya. Kunyange zvazvo vanhu veguta racho vachishamiswa na“mashoko” ake “anofadza,” vanoda kuona zvishamiso. Zvisinei, pane kuita mabasa esimba akawanda ikoko, Jesu anofumura udyire hwavo nokushaya kutenda kwavo. Vatsamwa kwazvo, vari musinagogi vanosimuka, vanobata Jesu, vanomubudisa kunze ndokuenda naye kurutivi rwegomo kuti vamusundidzire pamawere nomusoro. Asi anopunyuka vakamubata onzvenga asina kukuvara. “Awa” yorufu rwake haisati yasvika.—Ruka 4:16-30.
11. (a) Nei vamwe vatungamiriri vechitendero vachiuya kuzonzwa Jesu? (b) Nei Jesu achipomerwa kuputsa Sabata?
11 Vatungamiriri vechitendero—vanyori, vaFarisi, vaSadhusi, navamwe—kakawanda varipowo Jesu paanoparidza. Vakawanda vavo varipo, kwete kuti vateerere nokudzidza, asi kuti vawane mhaka uye kuti vaedze kumuisa pamusungo. (Mateu 12:38; 16:1; Ruka 5:17; 6:1, 2) Somuenzaniso, achishanyira Jerusarema kunopinda Paseka ya31 C.E., Jesu anorapa murume ave achirwara kwemakore 38. Vatungamiriri vechitendero vechiJudha vanopomera Jesu mhaka yokuputsa Sabata. Anopindura kuti: “Baba vangu vave vachishanda kusvikira zvino, uye ndinoramba ndichishanda.” Zvino vaJudha vanomupa mhosva yokumhura Mwari nemhaka yokuti anozviti Mwanakomana waMwari nokumuti Baba. Vanotsvaka kuuraya Jesu, asi iye navadzidzi vake vanobva muJerusarema vachienda Garireya. Isuwo, kufanana naye, tingaita nokuchenjera kudzivisa kubonderana kusina kufanira nevanotishora sezvatinoshanda nesimba mubasa rokuparidza Umambo nokuita vadzidzi.—Johani 5:1-18; 6:1.
12. Jesu anoshanda ndima yeGarireya zvakakura sei?
12 Kwegore rinotevera nehafu kana kuti pfuurei, Jesu anoitira hwakawanda hwoushumiri hwake muGarireya, achishanyira Jerusarema chete kuti apinde mitambo mitatu yavaJudha inoitwa pagore. Pamwe chete, iye aita nzendo nhatu dzokuparidza muGarireya: rwokutanga aine vadzidzi vana vatsva, rwechipiri aine vaapostora 12, uye rwumwe rwacho rukuru vaapostora vakarovedzwa vachitumwawo. Kupupurira chokwadi kwakakura sei kunoitwa muGarireya!—Mateu 4:18-25; Ruka 8:1-3; 9:1-6.
13, 14. (a) Pachiitiko chipi apo vaJudha vari kutsvaka kubata Jesu? (b) Nei vakuru vanobatira vachikundikana kubata Jesu?
13 Mumatsutso a32 C.E., uye “awa” yaJesu ichiri mberi. Mutambo wemaTebhenekeri wava pedyo. Vanun’una vaJesu zvino vanomukurudzira kuti: “Pfuura pano uende muJudhiya.” Vanoda kuti Jesu aratidze masimba ake okuita zvishamiso kune avo vose vakaungana pamutambo muJerusarema. Kunyange zvakadaro, Jesu anoziva ngozi yacho. Saka anoti kuvanun’una vake: “Ini handisati ndave kukwira kumutambo uyu, nokuti nguva yangu yakafanira haisati yanyatsosvika.”—Johani 7:1-8.
14 Achimbomira-mira muGarireya kwenguva yakati, Jesu anoenda kuJerusarema “kwete pachena asi muchivande.” Zvechokwadi, vaJudha vari kumutsvaka pamutambo, vachiti: “Munhu uya ari kupi?” Mutambo wave pakati, Jesu anoenda mutemberi uye noushingi anotanga kudzidzisa. Vanotsvaka kumubata, zvichida kuti vamuise mujeri kana kumuita kuti aurawe. Asi, havabudiriri nokuti ‘awa yake haisati yasvika.’ Vakawanda zvino vanotenda muna Jesu. Kunyange vakuru vanobatira vatumwa navaFarisi kunomusunga vanodzoka vakabata maoko, vachiti: “Hapana mumwe munhu akambotaura zvakafanana neizvi.”—Johani 7:9-14, 30-46.
15. Nei vaJudha vachinhonga matombo kuti vateme Jesu, uye iye anotanga basa ripi rokuparidza pashure pacho?
15 Kusanzwisisana pakati paJesu navaJudha vanomushora kunopfuurira sezvaanenge achidzidzisa nezvaBaba vake patemberi mukati momutambo. Pazuva rokupedzisira romutambo, vashatiriswa nezvinotaurwa naJesu pamusoro pokuvapo kwake asati ava munhu, vaJudha vanonhonga matombo kuti vamuteme. Asi anovanda otiza asina kukuvadzwa. (Johani 8:12-59) Achigara kunze kweJerusarema, Jesu anotanga basa guru rokupupura muJudhiya. Anosarudza vadzidzi 70, uye, apedza kuvarayiridza, anovatuma vari vaviri vaviri kuti vashande ndima yacho. Vanotungamira kunzvimbo yose neguta rose uko Jesu ari kuronga kuenda achiperekedzwa navaapostora vake.—Ruka 10:1-24.
16. Jesu anotiza ngozi ipi pari kuitwa Mutambo weTsauriro, uye anobatikana nebasa ripi zvekare?
16 Muchando cha32 C.E., “awa” yaJesu iri kuswedera pedyo. Anouya kuJerusarema kuMutambo weTsauriro. VaJudha vachiri kutsvaka kumuuraya. Jesu paari kufamba muberere retemberi, vanomukomba. Vachimupomera kumhura Mwari zvekare, vanonhonga matombo kuti vamuuraye. Asi Jesu anonzvenga sezvaakaita muzviitiko zvakapfuura. Nguva pfupi atove mumugwagwa achidzidzisa, iye zvino muguta neguta uye musha nomusha muruwa rwePeriya, mhiri kweJodhani achibva Judhiya. Uye vakawanda vanotenda maari. Asi mashoko anokurumidza kuuya ezveshamwari yake inodiwa Razaro anomuita kuti adzoke kuJudhiya.—Ruka 13:33; Johani 10:20-42.
17. (a) Jesu anogamuchira mashokoi okukurumidzira achiparidza muPeriya? (b) Chii chinoratidza kuti Jesu ari kuziva chinangwa chezvaachafanira kuita uye nguva ichaitika zvinhu?
17 Mashoko okukurumidzira acho anobva kuna Marita naMariya, hanzvadzi dzaRazaro, vanogara muBhetani yeJudhiya. “Ishe, onai! uyo wamunoda kwazvo ari kurwara,” nhume yacho inorondedzera. “Kurwara uku hakuna vavariro yokuuraya,” anopindura kudaro Jesu,“asi ndekwembiri yaMwari, kuti Mwanakomana waMwari apiwe mbiri nakwo.” Kuti aite chinangwa ichi, Jesu anoramba ari kwaari kwemazuva maviri achizviita achida hake. Ipapo anoti kuvadzidzi vake: “Ngatiendeizve kuJudhiya.” Vasingadi, vanopindura kuti: “Rabhi, nguva ichangobva kupfuura vaJudha vakanga vachitsvaka kukutakai nematombo, zvino moenda ikoko zvakare?” Asi Jesu anoziva kuti nguva yasara ye“maawa . . . echiedza chemasikati,” kana kuti nguva iyo Mwari akatara nokuda kwoushumiri hwake hwapasi, ipfupi. Anonyatsoziva zvaanofanira kuita uye kuti nei.—Johani 11:1-10.
18. Jesu paanosvika muBhetani, zvinhu zvakamira sei, uye chii chinoitika pashure pokunge asvika?
18 MuBhetani, Marita ndiye anotanga kusangana naJesu, achiti: “Ishe, kudai makanga muri pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa.” Mariya neavo vakanga vauya kuimba yavo vanotevera. Vose vari kuchema. “Makamuviga kupi?” Jesu anobvunza kudaro. Vanopindura kuti: “Ishe, uyai muone.” Pavanosvika paguva rokurangaridza—bako rine dombo rakavhara pamusuo—Jesu anoti: “Bvisai dombo.” Asinganzwisisi zviri kuda kuitwa naJesu, Marita anoramba achiti: “Ishe, anofanira kunge ave kunhuhwa panguva ino, nokuti ave mazuva mana.” Asi Jesu anobvunza kuti: “Handina kukuudza here kuti kudai waizotenda waizoona mbiri yaMwari?”—Johani 11:17-40.
19. Nei Jesu achinyengetera pachena asati amutsa Razaro?
19 Panobviswa dombo rakavhara guva raRazaro, Jesu anonyengetera zvinonzwika kuti vanhu vazive kuti zvaari kuda kuita zvinoitwa nesimba raMwari. Ipapo anodanidzira nenzwi guru kuti: “Razaro, buda!” Razaro anobuda makumbo namaoko ake zvakasungwa namachira anomonerwa vakafa uye chiso chake chakavharwa nomucheka. “Musunungurei mumurege aende,” Jesu anodaro.—Johani 11:41-44.
20. Avo vanoona Jesu achimutsa Razaro vanoita sei?
20 Pakuona chishamiso ichi, vakawanda vavaJudha vanga vauya kuzonyaradza Marita naMariya vanotenda muna Jesu. Vamwe vanoenda kunoudza vaFarisi zvaitika. Vanoita sei? Pakarepo, ivo navapristi vakuru vanodanidzira musangano weSanihedrini wokukurumidzira. Vave kutya, vanochema-chema kuti: “Toitei, nokuti munhu uyu anoita zviratidzo zvakawanda? Kana tikamurega achiita izvi, vose vachatenda maari, uye vaRoma vachauya vakatora nzvimbo yedu norudzi rwedu.” Asi Mupristi Mukuru Kayafasi anoti kwavari: “Hapana chamunomboziva, uye hamurangariri kuti zvinokubetserai kuti munhu mumwe afe nokuda kwevanhu kwete kuti rudzi rwose ruparadzwe.” Naizvozvo, kubva pazuva iroro vanorangana kuuraya Jesu.—Johani 11:45-53.
21. Chishamiso chokumutswa kwaRazaro chinoshanda sokutanga kwechii?
21 Saka nokunonoka kwake kusvika muBhetani, Jesu anogona kuita chishamiso chisina angachiramba. Apiwa simba naMwari, Jesu anomutsa murume ave akafa kwemazuva mana. Kunyange Sanihedrini yakakwirira inomanikidzirwa kuzviona ndokupa mutongo worufu kuMuiti weChishamiso! Saka chishamiso chacho chinoshanda sepokutangira penguva yokuchinja kukuru inokosha muushumiri hwaJesu—kuchinja kubva panguva iyo “awa yake yakanga isati yasvika” kupinda munguva apo “awa yasvika.”
• Jesu akaratidza sei kuti aiziva basa rake raakapiwa naMwari?
• Nei Jesu achiramba zvaanokumbirwa naamai vake nezvewaini?
• Tingadzidzei kubva munzira idzo Jesu aiwanzobata nadzo nevaipikisa?
• Nei Jesu achinonoka kuenda kuna Razaro anorwara?
[Mifananidzo iri papeji 12]
Jesu akapedzera simba rake kubasa rake raakapiwa naMwari